AH: January 2012
Hacker ဆိုတဲ့ အသုံးအနှုန်းကတော့ ကျွန်တော်တို့နဲ့ သိပ်မစိမ်းတော့ပါဘူး။ Hacker လို့ပြောလိုက်ရင် ပြေးမြင်တာကတော့ လုံခြုံရေးစနစ်တွေနဲ့ ကာကွယ်ထားတဲ့ ကွန်ပျူတာ ကွန်ယက်တွေထဲကို ဖောက်ထွင်း ၀င်ရောက်၊ မွှေနှောက်နိုင်စွမ်းရှိသူတွေလို့ ကျွန်တော်တို့သိထားကြပါတယ်။ ဒီနေ့ အဲ့ဒီ Hacker ဆိုတဲ့ ဝေါဟရလေး အကြောင်း စိတ်ဝင်စားတာနဲ့ မွှေနှောက်ရှာရင်း Hacker အမျိုးအစားတွေနဲ့အတူ နာမည်ကြီး Hacker အကြောင်းကိုပါ ဖတ်မိပါတယ်။ ကျွန်တော့် အနေနဲ့ Hack လည်း မဟက်တတ်၊ Hacker လည်းမဟုတ်၊ ကွန်ပျူတာနဲ့ပတ်သတ်လို့ သြော်.. ဒါကြီးကို ကွန်ပျူတာလို့ခေါ်တာပါလားလေ ဆိုပြီးတော့လောက်သာ သိလေတော့ ကျွန်တော့်လိုပဲ Hacker တွေအကြောင်း စိတ်ဝင်စားသူတွေအတွက် ဒီပိုစ့်လေးကို တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
Hacker တွေကို အမျိုးအစားအားဖြင့် ၈ မျိုးခွဲထားတယ်လို့ ၀ိကီပီဒီယားမှာ ဆိုပါတယ်။ ဒါတွေကတော့ White hat, Black hat, Gray hat, Elite hacker, Script kiddie, Neophyte, Blue hat နဲ့ Hacktivist ဆိုပြီးတော့ ဖြစ်ပါတယ်။
Posted by AH at 1/31/2012 04:46:00 PM7comments
Posted by AH at 1/30/2012 11:28:00 PM 11 comments
တရုတ်နိုင်ငံ ဆောက်ပေးတဲ့ အီသီယိုပီးယားက Convention Center
ဒီနေ့ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က ပြလို့ အီသိယိုးပီယားနိုင်ငံ Addis Ababa မြို့မှာ တရုတ်နိုင်ငံက ဆောက်ပေးပြီး ပြီးစီးခဲ့တဲ့ Convention Center ကြီးကို တွေ့လိုက်ရပါတယ်။ အာဖရိက နိုင်ငံများ အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာ (African Union- AU) မှာ တည်ရှိတဲ့ ဒီ conference center ကြီးဟာ ၁၁.၃ ဟက်တာ ကျယ်ဝန်းတဲ့ မြေနေရာပေါ်မှာ တည်ဆောက် ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ အဆောက်အဦးကြီးကို တရုတ်နိုင်ငံက လက်ဆောင်အဖြစ် ပေးအပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်း ၁၃၀ကျော်ကုန်ကျတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ တရုတ်နိုင်ငံဟာ သုံးနှစ်အတွင်းမှာ အာဖရိကနိုင်ငံတွေကို unsecured loan လို့ခေါ်တဲ့ အလွတ်တိုး (အပေါင်ခံ ပစ္စည်းမပါဝင်သော) ချေးငွေ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၀ ဘီလီယံ ထုတ်ချေးမှာဖြစ်ပါတယ်။
Posted by AH at 1/30/2012 09:22:00 AM4comments
Posted by AH at 1/29/2012 03:28:00 PM2comments
Posted by AH at 1/28/2012 10:23:00 PM 12 comments
ပြီးခဲ့တဲ့ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့နဲ့ ကြာသာပတေးနေ့ တုန်းကတော့ အရင်သင်္ဘောဆောက်တုန်းက တူတူအလုပ်လုပ်ခဲ့ဖူးတဲ့ ကျွန်တော့် သူငယ်ချင်း မင်္ဂလာဆောင်ရှိတာနဲ့ ကျွန်တော်လည်း နန်တုန် မြို့ကို တစ်ခေါက်ရောက်ဖြစ်ပြန်ပါတယ်။ တရုတ်တွေရဲ့ မင်္ဂလာဆောင် ဘယ်လိုမျိုးဆိုတာ မတွေ့ဖူးတာလည်း တစ်ကြောင်း၊ သူငယ်ချင်းရဲ့ မင်္ဂလာဆောင်ဖြစ်တာလည်း တစ်ကြောင်း၊ မရောက်ရောက်အောင် လာခဲ့ပါမည်ဟု ကတိပေးထားမိသည်မှာလည်း တစ်ကြောင်း ဖြစ်သောကြောင့် ရောက်အောင် သွားဖြစ်ခြင်းဖြစ်သည်။
Posted by AH at 1/27/2012 09:52:00 PM6comments
Mystery Spot သို့မဟုတ် မြေထုဆွဲအားတွေ မူမမှန်တဲ့ နေရာလေး
Mystery Spot ဆိုတာကတော့ ထူးထူးခြားခြားကို ကမ္ဘာ့မြေထုဆွဲအားတွေ မူမှန်တဲ့ နေရာလေးပါ။ ဒီနေရာဟာ ကာလီဖိုးနီးယား ပြည်နယ် ဆန်တာ ခရုဇ် (Santa Cruz) ရဲ့အပြင်ဘက်နားလေးက redwood forest ထဲမှာ ရှိပါတယ်။ ပေ ၁၅၀ ၀န်းကျင်လောက်နေရာလေးမှာတော့ မူမမှန်တဲ့ ကမ္ဘာမြေကြီးရဲ့ဆွဲအားတွေ သက်ရောက်နေတဲ့ Mystery Spot ဆိုတဲ့ နေရာလေးကို သင်ကိုယ်တိုင် သွားဖြစ်ခဲ့ရင်ဖြင့် သင်တစ်သက်လုံး သင်ယူလာတဲ့ ကမ္ဘာမြေကြီးရဲ့ ဆွဲငင်အား သက်ရောက်မှု့တွေ၊ ရူပဗေဒ ဆိုင်ရာ နိယာမတွေ အားလုံးဟာ မေးခွန်းထုတ်စရာတွေ ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။
ဒီနေရာကို စတင်တွေ့ရှိတာက ၁၉၃၉ ခုနှစ်က စစ်ဆေးရေးအရာရှိတွေက တွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ ၁၉၄၀မှာတော့ အများပြည်သူတွေကို ၀င်ရောက်ခွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ ခုတော့ ဒီနေရာလေးကို နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း လူ သန်းပေါင်းများစွာ လာရောက်လည်ပတ်နေကြပါပြီ။
လူတချို့ကတော့ ဒီနေရာလေးဟာ ဂြိုလ်သားတွေက သူတို့ဂြိုလ်ကနေ ကတော့ပုံ သတ္တုတွေယူလာပြီးတော့ ဒီနေရာမှာမြှုပ်နှံကြသတဲ့။ ဒီတော့မှ သူတို့ ပန်းကန်ပြားပြန်တွေဟာ ကမ္ဘာမြေဆီကို အဆက်အသွယ် လုပ်လို့ရမယ်လို့ဆိုသလို၊ တစ်ချို့ကြတော့လည်း ဒီမြေကြီးထဲမှာ အာကာသ ယာဉ်ပျံကြီး နစ်မြုပ်နေတယ်လို့ ဆိုပြန်ပါတယ်။ တစ်ချို့ သီအိုရီတွေကတော့ ကမ္ဘာမြေကြီးထဲက ကာဘွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ်တွေ များပြီး စုနေတဲ့ နေရာလို့ ဆိုကြသလို၊ အလွန်ကြီးမားတဲ့ အရာကြီးတစ်ခုက လှည့်ပတ်နေတယ်လို့လည်း ယူဆကြပါတယ်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေ ယနေ့အချိန်အထိ ဒီ နေရာလေးရဲ့ ထူးခြားဆန်းကျယ်မှု့ကို ဘယ်သူမှ သေသေချာချာ ရှင်းမပြနိုင်သေးပါဘူး။ ဒီနေရာရောက်သွားရင် သင့်ကို တစ်ခုခုက ဆွဲထားသလိုမျိုး သင့်ခန္ဓာကိုယ်ဟာ တိမ်းစောင်းနေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ စိတ်ဝင်စားသူများ သွားရောက် လည်ပတ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ အောက်ကလင့်မှာ Mystery Spot ရဲ့ website လိပ်စာပေးထားပါတယ်။ စနေ၊ တနင်္ဂနွေများဆိုရင်တော့ လက်မှတ်ရဖို့တောင် ခက်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
Posted by AH at 1/24/2012 04:58:00 PM9comments
Posted by AH at 1/23/2012 08:20:00 PM7comments
ပြောရရင်တော့ ဒီပိုစ့်ဟာ အားနေလို့ ရေးဖြစ်သွားတာပါ။ စီလုတ်ပြည်ကြီးမှာ ရောက်နေသော အကျွန်ုပ်တစ်ယောက် တရုတ်နှစ်သစ်ကူး ပိတ်ရက်အတွင်း အဆိုပါ စီလုတ်ပြည်တွင် ပိတ်မိ၍ ခြေချုပ်မိလေသည်ဖြစ်ရကား သွားစရာ မယ်မယ်ရရမရှိ၊ သွားချင်သော်လည်း ချမ်းလွန်းသဖြင့် အပြင်မထွက်ချင်သေကြောင့် အဆိုပါ စီလုတ်တို့ ဘယ်သို့ ဘယ်ပုံ ဤကဲ့သို့သော နှစ်ကူးပွဲကြီးကို ကျင်းပရသနည်းဆိုတာကို သိချင်ပါသောကြောင့် ၀ိကီပီဒီးယားကို လှန်လှောရှာကြည့်လေသော အခါသမယတွင် တရုတ်နှစ်သစ်ကူးနှင့်ပတ်သတ်သော ပုံပြင်ကလေးကို ဖတ်မိပါလေ သတည်း။ သို့နှင့်ပင် အဆိုပါ တရုတ်နှစ်သစ်ကူးနှင့် ပတ်သတ်သော ပုံပြင်ကလေးကို ပိုစ့်လုပ်၍ ဆားချက်လိုက်ပါသည် ခင်ဗျား။
နှစ်သစ်ကူး အကြောင်းပုံပြင်ပြောရင် အနီ ရောင်နဲ့ ဟုန်ကျွန်း လောင်ဇူးလို့ခေါ်တဲ့ ဟုန်ကျွန်း ဆရာဘုန်းကြီးကို ဖယ်ပြီးတော့ ပြောလို့မရပါဘူး။ ဘာဖြစ်လို့လည်းဆိုတော့ ဒါက အဓိက အခန်းက ပါဝင်ပြီးတော့ တရုတ်တွေ ဘာကြောင့် အနီရောင်ကို သုံးတယ်ဆိုတာကို တွေ့ရလို့ပါ။ လွန်လေပြီးသော ရှေးနှစ်ပေါင်းများစွာကပေါ….. စီလုတ်ပြည်ကြီးမှာ နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း တရုတ်နှစ်သစ်ကူးတဲ့ အချိန်ရောက်လာပြီဆိုရင်ဖြင့် နယန် (Nian, 年) ဆိုတဲ့ ဘီလူးလို အကောင်ကြီးလာ ရွာတွေကို လာပြီးတော့ သောင်းကျန်းပါသတဲ့။ အဲ့ဒီ နယန်ဆိုတဲ့ အကောင်ကြီးဟာ တရုတ်နှစ်သစ်ကူးရဲ့ ပထမရက်ဆိုရင် လူတွေရဲ့ သီးနှံတွေ၊ မွေးထားတဲ့ အကောင်တွေကိုသာမက ရွာသားတွေ အထူးသဖြင့် ကလေးတွေကိုပါ စားသောက်ပါလေရောတဲ့။ ဒီတော့ ရွာသားတွေကလည်း ဒီ နယန်ကောင်ကြီးရဲ့ အန္တရာယ်ကနေ ကာကွယ်ဖို့ရန် ဟင်းတွေ ချက်ပြုတ်ပြီးသကာလ သူတို့ အိမ်ရှေ့ တံခါးပေါက်မှာ သွားရောက်ချထား ကြပါသတဲ့။ ဒီလို ချထားရင်ဖြင့် ဒီ နယန်ဆိုတဲ့ အကောင်ကြီးဟာ ဟင်းတွေကိုစားပြီး သူတို့ရွာလေးတွေကို မဖျက်စီးတော့ဘူးလို့ ယုံကြည်ကြပါတယ်။
Posted by AH at 1/22/2012 11:54:00 PM 14 comments
အဆော့ကောင်းလို့ ဦးနှောက်ထဲက အိမ်ရိုက်သံ ခွဲထုတ်လိုက်ရတဲ့ ငနဲ
လူမှန်ရင်တော့ တစ်ခါတစ်လေ ပေါက်ကရလုပ်ချင်ကြတာပေါ့လေ။ သို့ပေမယ့် ချီကာဂိုက ဒန်တေ အော်တူလို လိုတော့ ခေါင်းထဲကို အိမ်ရိုက်သံချောင်း ရိုက်တဲ့စက်နဲ့ အိမ်ရိုက်သံ ပစ်မသွင်းနဲ့ပေါ့။ ပြီခဲ့တဲ့ သောကြာနေ့မှာတော့ ဒီ ချီကာဂိုမြို့သားကို ဆရာဝန်တွေက ခွဲစိတ်ပြီးတော့ ၃.၇၅ လက်မရှိတဲ့ အိမ်ရိုက်သံချောင်းကို ခွဲထုတ်ခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ သို့ပေမယ့်လည်း ဒန်တေ ကိုတိုင်ကတော့ ဒီသံချောင်းဟာ သူ့ဦးနှောက်ရဲ့ အလယ်နေရာလောက်ကို အမှန်တကယ်ဝင်သွားခဲ့တယ်ဆိုတာကို ကိုယ်တိုင် မသိခဲ့ပါဘူးတဲ့။ ဆရာဝန်တွေက သူ့ရဲ့ ဦးခေါင်းကိုရိုက်ထားတဲ့ ဓာတ်မှန် ယူလာပြတဲ့အချိန်အထိ သူ့ကို နောက်နေတယ်လို့ပဲ ထင်ပါသတဲ့။
ပြီးခဲ့တဲ့ အင်္ဂါနေ့တုန်းက ဒန်တေ ဟာ စင်လေးတစ်ရင်ကို ဆောက်နေတုန်း သံရိုက်တဲ့ သေနတ်နဲ့ သူ့ဦးခေါင်းကို သူ့ဟာ သူ ပစ်လိုက်ပါတယ်တဲ့။ သူနဲ့ အလုပ်အတူလုပ်နေတဲ့ ဂေးလ် ဂလန်ဇာ ဆိုသူက သူရဲ့ ဒဏ်ရာကို ဆေးကြောပေးပါသတဲ့။ သို့ပေမယ့်လည်း ဒန်တေ ကိုယ်တိုင်ကတော့ သံချောင်းဟာ သူ့ခေါင်းထဲကို ၀င်သွားတယ်ဆိုတာမသိပဲ သူ့ခေါင်းကို တစ်စုံတစ်ယောက်က ထိုးလိုက်သလိုသာ ခံစားရပြီး သံချောင်းဟာ သူ့နားဘေးက ၀င်သွားတယ်လို့သာ ထင်ပါသတဲ့။
Posted by AH at 1/22/2012 02:59:00 PM3comments
Posted by AH at 1/21/2012 01:28:00 PM 8 comments
သြော်.. မိန်းမ မိန်းမ
Posted by AH at 1/20/2012 07:39:00 PM 8 comments
Posted by AH at 1/20/2012 11:33:00 AM3comments
နောက်ဆုံး ထွက်သက်မှာ မှတ်ချက်လေးပေးခဲ့နိုင်တဲ့ Facebook ပေါ်က if I die App.
ဟိုတစ်လောက တိုက်ပေါ်က ခုန်ချပြီး အဆုံးစီရင်သွားတဲ့ ကိစ္စလေးတွေဖြစ်သွား တာတွေ့မှာပါ။ သွားလေသူက သွားလေတော့မှ သူ့ရဲ့ Facebook ပေါ်တက်ကြည့်ပြီး စိတ်မကောင်းတဲ့အကြောင်း၊ ဘာကြောင်းညာကြောင်း ကွန်မန့်တက်ရေးကြပေမယ့် သွားလေသူကတော့ ဘယ်လိုမှ ကွန်မန့်ရေးမပေးနိုင်တော့ပါဘူး။ တစ်ကယ်တော့ သင့်ရဲ့ နောက်ဆုံးသွားလမ်းခရီးရောက်တော့မှ Facebook ပေါ်တက်ပြီး ဘိုင့် ဘိုင့် ဆို လက်ပြနှုတ်ဆက် Status Update လေးချန်ခဲ့ရမယ်ဆိုရင်တော့ သိပ်မနိပ်လှပါဘူး။ အဲ့ဒီအတွက် ရွေးချယ်စရာတစ်ခု ရှိပါပြီ။ ဒါကတော့ If I die ပါ။ အခုတော့ Facebook ပေါ်မှာ If I Die ဆိုတဲ့ App အသစ်ထွက်ပေါ်လာပါပြီ။
If I die ရဲ့ အလုပ်လုပ်ပုံလေးကတော့ ဒီလိုပါ - ဒီ App လေးကို Install လုပ်၊ ပြီးရင် ဖေ့စ်ဘွတ်ပေါ်က သင့်ရဲ့ အယုံကြည်ရဆုံး လူ ၃ ယောက်ကို ရွေးချယ်ပါ။ ဒီသုံးယောက်ကတော့ တစ်ကယ်လို့ သင်အမှန်အကန် သေသွားခဲ့ရင် သင်သေကြောင်း ထောက်ခံပေးရမယ့် ၃ ယောက်ပါ။ အဲ့ဒီ ၃ ယောက်ကို ရွေးချယ်ပြီးရင်တော့ သင်မှာခဲ့ချင်တာတွေ၊ ပြောခဲ့ချင်တာတွေ ကို ဗီဒီယိုနဲ့ ရိုက်ထားချင်ထား၊ ဒါမှ မဟုတ်လည်း ရေးချင်တာတွေကို တစ်ဝကြီးရေးထားပြီးရင် ဒီ App လေးက သိမ်းထားပေးမှာပါ။
Posted by AH at 1/19/2012 10:03:00 AM9comments
Posted by AH at 1/18/2012 12:22:00 PM4comments
Posted by AH at 1/17/2012 03:13:00 PM2comments
ဒီဇိုင်းချို့ယွင်းမှု့ကြောင့် လေယာဉ်တင်သင်္ဘောပေါ် မဆင်းနိုင်တဲ့ F35 Lightning II
F35 Lightning II ဟာ ကမ္ဘာပေါ်မှာတော့ ဈေးအကြီးဆုံး လေယာဉ်ပျံတွေထဲမှာ အပါအ၀င်ပါ။ ဒါကို အရင်ရေးခဲ့တဲ့ ပိုစ့် ဈေးအကြီးဆုံး တိုက်လေယာဉ်များမှာ ကြည့်နိုင်ပါတယ်။ ဒီလေယာဉ်ဟာ မဟာဗျူဟာမြောက် စစ်ဆင်ရေးတွေအတွက် ဒီဇိုင်းထုတ်လုပ်တာဖြစ်ပြီးတော့ လေယာဉ် အတက်အဆင်းအတွက် ဒီဇိုင်း ၃မျိုး ထုတ်လုပ်ထားပါတယ်။ ပထမ အမျိုးအစားကတော့ သမရိုးကျ လေယာဉ် အတက်အဆင်းပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ ဒုတိယ အမျိုးအစားကတော့ လေယာဉ်ပြေးလမ်းတိုမှာလည်း လေယာဉ်ပျံသန်းထွက်ခွာနိုင်ပြီး ဒေါင်လိုက်ပုံစံနဲ့ လေယာဉ်ပျံ ဆင်းသက်နိုင်တာပါ။ တတိယတစ်မျိုးကတော့ လေယာဉ်တင်သင်္ဘောတွေမှာ တင်ဆောင်နိုင်စေရန် ဒီဇိုင်းရေးဆွဲပြီး ထုတ်လုပ်ခဲ့တာပါ။ ဒီလေယာဉ်တစ်စီးရဲ့ ကုန်ကျစရိတ်ဟာ ပျမ်းမျှ ဒေါ်လာ ၁၂၂ သန်းရှိပါတယ်။ ခုတော့ ပင်တဂွန်ကနေ ပေါက်ကြားလာတဲ့ သတင်းတစ်ရပ်အရတော့ ဒီလေယာဉ်ဟာ ဆင်းသက်ပုံ ရှစ်မျိုးကို စမ်းသပ်ကြည့်ရာမှာ မအောင်မြင်ခဲ့ဘူးလို့ ဆိုပါတယ်။ အဓိက အကြောင်းအရင်းကတော့ လေယာဉ်တင်သင်္ဘောပေါ်ဆင်းသက်ရာမှာ လေယာဉ်ရဲ့ အရှိန်ကို အလျှင်အမြန်လျှော့ချစေဖို့နဲ့၊ လေယာဉ်ပျံ ဆင်းသက်နေတုန်းမှာ အရှိန်လွန်ပြီး ပြေးလမ်းကြောင်းမှကျော်ကာ ပင်လယ်ထဲ ထိုးကျမသွားအောင် ထိန်းတဲ့ ချိတ် “arrestor hook” က ပြသနာဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ အဲ့ဒီလေယာဉ်ရဲ့ ချိတ်ကို သင်္ဘောရဲ့ ကြိုးနဲ့ ဆင်းသက်ချိန်မှာ အံဝင်ခွင်ကျ ချိတ်မိမှ လေယာဉ်ဟာ လေယာဉ်တင်သင်္ဘောပေါ်ကို ဆင်းသက်နိုင်မှာပါ။ ခုတော့ဒီ ချိတ်ဟာ လေယာဉ်ပျံရဲ့ ဘီးနဲ့ အလွန်ကို နီးကပ်နေတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
Posted by AH at 1/16/2012 04:06:00 PM3comments
ဒီတစ်ခါတော့ ကမ္ဘာအရပ်ရပ်မှ စစ်သမီးများ သို့ အမျိုးသမီးစစ်သည်များ မဟုတ်ပါဘူး၊ ကမ္ဘာအ၀ှမ်းမှာရှိတဲ့ စွမ်းရည်ထက်မြက်တဲ့ အထူးစစ်သည်တွေ အကြောင်းပါ။
ဒါကတော့ ရုရှားနိုင်ငံက အထူးစစ်သည် (Russia’s Special Purpose Regiments)တွေပါ။ ဒီစစ်သည်တွေရဲ့ အရည်အသွေးဟာ အမေရိကန်ရဲ့ နာမည်ကျော် ဦးထုပ်စိမ်း အထူးစစ်သည်များ (Green Berets) ရဲ့ စွမ်းရည်လိုမျိုးရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ Spetsnaz တွေအတွက်တော့ အကောင်းဆုံး၊ နာကျင်မှု့ဒဏ်ကို ခံနိုင်ရည်ရှိဖို့၊ စစ်ပွဲတွေမှာ ရွပ်ရွပ်ချွံချွံ တိုက်ခိုက်ဖို့ လေ့ကျင့်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီစစ်သည်တွေဟာ တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး ဒဏ်ရာရစေတဲ့အထိ တိုက်ခိုက်လေ့ကျင့်ကြပါတယ်။ တစ်ခါတစ်လေ သူတို့ရဲ့ နံရိုးတွေ၊ လက်တွေ၊ ကျောရိုးတွေ၊ ခြေထောက်တွေ ပါလေ့ကျင့်ရင်းနဲ့ ကျိုးကြတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒီလိုလေ့ကျင့်မှု့ပြီးဆုံးရင်တော့ အရည်အသွေးပြည့်ဝတဲ့ Spetsnaz အထူးစစ်သားတွေဖြစ်ပါပြီတဲ့။ ဒီအထူးစစ်သည်တွေကိုတော့ မဟာဗျူဟာချမှတ်ဖို့အတွက် ရန်သူ့နယ်မြေအတွင်းဝင်ရောက်ကာ ကင်းထောက်တာတွေ၊ အနီးကပ် တိုက်ပွဲတွေ အသုံးပြုသလို၊ နိုင်ငံရဲ့ အရေးကြီး ရာထူးမြင့်မားတဲ့ နိုင်ငံရေး ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်လည်း အနီးကပ် အထူး ကိုယ်ရံတော်အဖြစ် အသုံးပြုပါသတဲ့။
Posted by AH at 1/13/2012 01:31:00 PM6comments
အရင်တုန်းကတော့ သိပ္ပံဝတ္တုတွေ၊ သိပ္ပံဇာတ်လမ်းတွေမှာတော့ အင်္ဂါဂြိုလ်ပေါ်က ဂြိုလ်သားတွေနဲ့ စစ်ခင်းတာတွေ၊ ဂြိုလ်သားတွေက ကမ္ဘာကြီးပေါ်ကို လာကြတာတွေကို ဖတ်ဖူးကြမှာပါ။ ခုတော့ လူသားတွေလည်း အင်္ဂါဂြိုလ်ပေါ်ကို သွားဖို့ ပြင်ဆင်နေကြပါပြီ။ ယုံချင်ယုံ မယုံချင်နေမဟုတ်တော့ပါဘူး။ အမှန်တကယ်ကို ပြင်ဆင်နေတာပါ။ အင်္ဂါဂြိုလ်ကို ခရီးကိုသွားဖို့ မိုင်ပေါင်း ၃၅၂ သန်း အကွာအဝေးကို သွားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ အင်္ဂါဂြိုလ်ပေါ်ကို ရောက်ဖို ၇ လကြာလောက် ခရီးသွားရပါမတဲ့။ သွားနေတဲ့ ခရီးလမ်းမှာ အာကသထဲက ရောင်ခြည်တွေ၊ ရေခဲမှတ်အောက်ရောက်နေတဲ့ အပူချိန်၊ မြေထုဆွဲအားမရှိတဲ့ အခြေအနေတွေနဲ့လည်း ကြုံရဦးမှာပါ။ ဂြိုလ်ပေါ်ကို ရောက်သွားရင်လည်း မခန့်မှန်းနိုင်တဲ့ အခက်အခဲတွေ ရှိမှာပါ။ တကယ်လို့ သင်အင်္ဂါဂြိုလ်ပေါ်ကို ရောက်ခဲ့ရင်တော့ အပြာရောင် အစက်အပျောက်ကလေးအဖြစ်မြင်နေရမယ့် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ကမ္ဘာကြီးကိုကြည့်ပြီး အလွမ်းဖြေနိုင်မှာပါ။ ဒီတော့ အင်္ဂါဂြိုလ်ခရီးစဉ်ကို လိုက်ပါချင်ပါလား?
Posted by AH at 1/12/2012 12:56:00 PM3comments
အန္ဒိယနိုင်ငံက ၇ နှစ်အရွယ် လာလီတာ တတီလို့အမည်ရတဲ့ မိန်းကလေးဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ အောက်တိုဘာလကထည်းကပျောက်ဆုံးသွားခဲ့တာပါ။ ခုရက်ပိုင်းမှာတော့ သူမရဲ့ ရုပ်အလောင်းကို တွေ့ရှိရာကနေ ဒီအမှု့ကို ခြေရာခံမိတာပါလို့ ဘီဂျာပေါ်ဒေသ ချာဟက်တီဂရှက် က ရဲတပ်ဖွဲ့ကပြောသွားပါတယ်။ ရဲတပ်ဖွဲ့ဟာ အဲ့ဒီဒေသက ဆင်းရဲနုံချာလှတဲ့ လယ်သမား ၂ယောက်ကို ဒီကလေးမလေးကို သတ်တဲ့ အမှု့နဲ့ ဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်။ ရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့ ထုတ်ပြန်ချက်အရတော့ ဒီလယ်သမား ၂ယောက်ဟာ အဆိုပါ ကလေးမကလေးကို သူတို့ရဲ့ လယ်မြေတွေမှာ သီးနှံအထွက်တိုးစေဖို့ ယဇ်ပူဇော်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
အဆိုပါ တတီဆိုတဲ့ မိန်းကလေးဟာ သူတို့အိမ်နားက အိမ်မှာ ရုပ်မြင်သံကြားသွားကြည့်ပြီးအပြန်မှာ ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတာပါ။ ရဲအရာရှိအဆိုအရ အဆိုပါ လယ်သမားနှစ်ယောက်ဟာ အဆိုပါ ကလေးမကလေးကို သတ်ပြီးတော့ သူမရဲ့ အသည်းကို ထုတ်ယူပြီး ယဇ်ပူဇော်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ခုတော့ ဒီလယ်သမားနှစ်ယောက်ရဲ့ ထွက်ဆိုချက်တင်မကပဲ သက်သေပါ လုံလောက်တဲ့အတွက် ဒီနှစ်ယောက်ကို လူသတ်မှု့နဲ့ စွဲချက်တင်ပြီးတော့ ထောင်ဒဏ်တစ်သက်တစ်ကျွန်း ဒါမှမဟုတ်ရင် သေဒဏ်ချမှတ်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလယ်သမားနှစ်ယောက်ဟာ တရီဘောလ် “tribals” လို့ခေါ်တဲ့ ဒေသကဖြစ်ပြီးတော့ အဲ့ဒီဒေသတွေဟာ အလွန်ကို တိုးတက်မှု့နှုန်းနှေးကွေးပြီး ပညာမတတ်တဲ့ လူတွေ များတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ အန္ဒိယမှာတော့ လူသားတွေကို ယဇ်ပူဇော်တဲ့ အပြုအမူဟာ အလွန်ကိုတွေ့ရခဲပေမယ့် ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ပိုင်းတွေမှာတော့ အနည်းငယ် ဖြစ်ပွားလာပါတယ်တဲ့။ သြော်.. မသိမှု့များ တယ်ကြောက်ဖို့ ကောင်းတာကိုး။
Posted by AH at 1/11/2012 01:10:00 PM7comments
Posted by AH at 1/10/2012 09:55:00 PM7comments
Posted by AH at 1/10/2012 03:59:00 PM6comments
Posted by AH at 1/09/2012 10:24:00 AM9comments
ပြန်လာတော့ အမှတ်တရ ၀ယ်လာတာက သော့ချိတ်နှစ်ခု။ ဗိုလ်ချုပ်ပုံနှင့် အမေစုပုံ သော့ချိတ်ဖြစ်သည်။ ဒါမျိုးတွေ ခုမှမြင်ရတော့သည်။ အမေစုရဲ့ ပိုစတာကြီးတွေ့တော့ ကားပေါ်ကနေ မှီအောင် မနည်းရိုက်ယူရသည်။ ရွှေပြည်ကြီးက ပြန်ရောက်တာကတော့ ကြာကြာလှပြီပေါ့။ သို့ပေမယ့်လည်း ပြန်ကထဲက အချိန်ကမရ၊ ဟိုပြေးဒီလွှားနဲ့ သွားချင်လှတဲ့ ချောင်းသာမှာ အုန်းသီးထဲ ၀ီလေးထည့်ပြီးတောင် မစုပ်ခဲ့ရပါဘူး။ ခုလည်း စင်ကျားပေါမှာ ခဏလေး အ၀င်ပြပြီး စီလုတ်ပြည်ကို ပြန်ခြေချရပြန်ပြီ။
Posted by AH at 1/07/2012 10:37:00 PM6comments
မပစ်ပစ်က ၂၀၁၂ အတွက် တစ်နေ့တာဆိုပြီး တက်ဂ် ချလိုက်တော့ ကျွန်တော့် တစ်နေ့တာလေးကို
သူ့ပုံစံလေးအတိုင်း ပြန်ရေးလိုက်ပါတယ်။ ၂၀၁၂ ကတော့ ကျွန်တော့်အတွက် လောလောဆယ်
ပျင်းစရာ အတော်ကောင်းသော နှစ် အစပိုင်းဖြစ်နေပါတယ်။ ဒီကြားထဲ ခုဒီနှစ်မှာ သင်္ဘောအသစ်
၂စီးဆောက်နေတဲ့ သင်္ဘောကျင်းကလည်း Heavy Industry ဆိုတဲ့ဟာကြီးဖြစ်နေတော့ တစ်နေရာနဲ့
တစ်နေရာကို အနည်းဆုံး ၁၅ မိနစ်လောက် လျှောက်သွားနေရပါတယ်။ အလုပ်ကတော့
ပြောပလောက်အောင် မများပေမယ့် ခြေတိုတာရယ်၊ ဟိုတယ်ထဲမှာ ပိတ်မိနေတာရယ်ကြောင့်
ပရုတ်လုံးလို လုံးပါးပါးနိုင်တဲ့ နှစ်ဖြစ်နေပါတယ်။
Alarm မည်နေတဲ့ ဖုန်းကို ဂြိုလ်ကြည့်ကြည့်ပြီး ပိတ်ပါတယ်။ မိန်းမကို နှိုးပါတယ်။
မနက်စာကို ဘယ်လိုအစားအစာ စားရတာကြိုက်ပါသလဲ
လက်ဖက်ရည် ပုံမှန် လေးတစ်ခွက်ရယ်၊ ပဲနံလေးတစ်ပွဲလောက်စားပြီး သူငယ်ချင်းတွေနဲ့
ခုတော့ မနက်တိုင်း ၆နာရီခွဲမှာ ဟိုတယ်က စားသောက်ဆိုင်ဖွင့်တော့ အဲဒီအချိန်သွား ၁၅
မိနစ်လောက်စောင့်ရတဲ့ ဂျုံနဲ့ပြောင်းဖူးဆံ ကျိုထားတဲ့ခွက်တစ်ခွက်ရယ် ကော်ဖီတစ်ခွက်ရယ်ကို ၂
မိနစ်အတွင်းအအေးခံ ၃မိနစ်အတွင်းပြီးအောင်သောက် ၆နာရီ ၅၀ လာကြိုတဲ့ ကားဆီကို
အိမ်မှာ ငပိဖျော်ကောင်းကောင်းလေးနဲ့ တို့စရာ အစုံလေးနဲ့ အရည်သောက်လေးနဲ့ စားချင်သပေါ့။
အလုပ်မှာကော်ဖီ ဘယ်နှစ်ခွက် သောက်ပါသလဲ
ညစာကတော့ အမြဲတမ်း ဟိုတယ်က စားသောက်ဆိုင်မှာ ပါရမီထူးချွန်သော ဘာချက်ချက်ဘယ်လိုမှ
စားမကောင်းသော စားဖိုမှုး၏ လက်ရာကို သည်းခံကာ မြိုချ စားသောက်နေရပါကြောင်း။
ညနေစာစားရင်းနဲ့ အများဆုံးစဉ်းစားဖြစ်တတ်တဲ့ အကြောင်းအရာ
ဟင်း…… ဘာအရသာကြီးမှန်းမသိဘူးကို တလုပ်စားပြီးတိုင်း တစ်ခါစဉ်းစားမိပါတယ်။
အေးဒယ်… အေးလိုက်ဒါ…. ဂတ်… ဂတ်… ဂတ်…… သြော်.. ဘ၀ ဘ၀ ဘ၀….
Posted by AH at 1/07/2012 11:45:00 AM9comments
အန်တိုနီယို စီ လို့ ခေါ်တဲ့ အီတလီနိုင်ငံက အသက် ၉၉ နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ အဖိုးအိုကတော့ ပြီးခဲ့တဲ့ ခရစ်စမတ်မတိုင်ခင်က သူ့မိန်းမဖြစ်သူ အသက် ၇၇ နှစ်ရှိတဲ့ ရိုဆာ စီ ဆိုသူကို တရားရုံးဦးတိုက်ပြီး ကွာရှင်းခဲ့ပါသတဲ့။ ကွာရှင်းရတဲ့ အကြောင်းကတော့ သူ့မိန်းမဖြစ်သူဟာ ၁၉၄၀ ၀န်းကျင်တုန်းက သူမရဲ့ချစ်သူနဲ့ ဖောက်ပြန်ခဲ့လို့ပါတဲ့။ ဒီအကြောင်းကို ရေးထားတဲ့ စာကလေးကို အဖိုးကြီးကတွေ့သွားပြီး တရားရုံးကို ပို့တာဖြစ်ပါတယ်။
ခုတော့ ဒီလင်မယားဟာ နှစ်ပေါင်း ၈၀လောက် တွဲလက်မြဲခဲ့တဲ့ နေ့ရက်လေးတွေကို ဖြုတ်ဖို့ ပြင်ဆင်နေပါတယ်။ သူတို့မှာ သားသမီး ၅ ယောက်ရှိပြီး မြေးပေါင်း ဒါဇင်ကျော်ရှိကာ မြစ်တစ်ယောက်ပါ ရနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလို ဖောက်ပြန်တဲ့ စာတစ်စောင်ကို တွေ့ပြီးကထည်းက အိမ်ထောင်ရေးဟာ မသာမယာ ဖြစ်ခဲ့ပြီး ပြီးခဲ့တဲ့ ၁၀ နှစ်လောက်ကထည်းက အဖိုးအိုဟာ ရောမမြို့မှာ ရှိတဲ့ သူတို့ အိမ်ကလေးကနေပြီးတော့ သူ့သားသမီးတွေဆီကို ပြောင်းနေခဲ့တာပါ။
အဖိုးအိုဟာ ဇနီးဖြစ်သူကို ၁၉၃၀ ၀န်းကျင်တုန်းက အီတလီနိုင်ငံ နေပယ်မြို့ကလေးမှာ စတင်တွေ့ရှိခဲ့ပြီး အဲ့ဒီကနေစပြီးတော့ လက်တွဲခဲ့ကြတာပါတဲ့။ ဒါဟာ သမိုင်းမှတော့ အသက်အကြီးဆုံး ကွာရှင်းမှု့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီမတိုင်ခင်ကတော့ အသက်အကြီးဆုံးကွာရှင်းတဲ့အမှု့ဟာ အင်္ဂလန်နိုင်ငံက ဘာတီ နဲ့ ဂျက်စီ ၀ုဒ် တို့အတွဲဖြစ်ပြီး သူတို့ဟာ နှစ်ယောက်စလုံး အသက် ၉၈ နှစ်အရောက်မှာ ကွာရှင်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
သြော်.. အိမ်ထောင်ရေးဖောက်ပြန်တော့လည်း ဒီလို အဖြစ်အပျက်တွေဟာ အရိပ်မည်းကြီးလိုပဲ ဘ၀တစ်လျှောက်လုံး လိုက်နေတာပါပဲ။
Posted by AH at 1/03/2012 12:03:00 PM 11 comments